Ady mafy vao nahazo anjaran-tsehatra ao amin’ny ‘Fast and Furious 9′ ity mpanao haiady avy any Kamerona ity · Global Voices teny Malagasy
Avy amin'ny fianakaviana mpiady i Francis Ngannou
Voadika ny 05 Septambra 2019 6:14 GMT
Mitodi-doha mankany amin'ny efijery lehibe i Francis Ngannou, mpiady amin'ny sokajy mavesatra avy any Kamerona. Nopihana tamin'ny taona 2017 avy amin'i X2o ao amin'ny Wikimedia Commons CC BY 4.0 ny sary.
Raha mbola mpiasan'ny fitrandrahana fasika tao an-tanàna nahaterahany tao Batié, tany Kamerona avaratra izy roapolo taona lasa izay, tsy hahalala mihitsy i Francis Ngannou hoe indray andro any anie izy ka hipoitra any amin'ny andian-tantara anisan'ny malaza indrindra any Etazonia.
Tafiditra ao anatin'ny “Fast and Furious 9” ity mpiadin'ny Ultimate Fighting Championship (UFC) sy ny Mixed Martial Arts (MMA) ity ary izy no Afrikana faharoa hipoitra ao amin'ny marika, aorian'ilay Beninoà Amerikana, Djimon Gaston Hounsou.
“Efa fotoana ela no niandrasako taorian'ny fihaonana hahazoana ilay anjara fiantsehatra ary somary kirikiriana sy be tebiteby aho tamin'ny fotoana nandraisana ny vaovao,” hoy i Ngannou nandritra ny tafatafa an-telefônina. “Avy eo nanamafy tamin'ny ekipako [UFC] ry zareo [Universal Studios] fa nomena anjaran-tsehatra aho, satria raha mijery ny lahatsoratro [tao amin'ny Twitter] ianareo dia avy amin'ny Universal Studios iny,” hoy i Ngannou.
Eo am-pamolavolana ny hoavy!!!
Fast and furious fahasivy no ivoahako an-tsarimihetsika voalohany ary tsy andriko izany 🤩
Ny fahombiazana tsy mbola nisy toy izany azon'i Ngannou teo amin'ny haiady mifangaro no anisan'ny nahatafiditra azy ho ao amin'ny filma, izay antenaina hivoaka amin'ny Mey 2020. Nandresy in-14 tamin'ny ady nataony im-17 tao amin'ny MMA izy.
Kameroney 32 taona athletan'ny sokajy mavesatra; vonona hanomboka hiantsehatra ao amin'ny sarimihetsika amerikana marika ‘Fast & Furious 9′ i Francis Ngannou(@francis_ngannou). Arahabaina!
Namoaka i Ngannou, izay nisefosefo avy amin'ny fahasahiranana, fahantrana ary ny fitolomana tao Kamerona: “Hitanao, rehefa miandry zavatra ianao ary tena mientanentana izay tsy izy amin'izany, ary any amin'ny farany, dia miteny tsotra ianao ‘eny azonao ny anjaran-tsehatra,’ hoy ny fanazavany, “ somary misaritaka kely ianao; faly ianao fa tsy hitanao izay atao…faly ianao fa tsy hainao izay hanehoana izany,” hoy i Ngannou, izay nandao an'i Kamerona enin-taona lasa izay fa nankany Eoropa mba hahazoana fiainana tsara kokoa.
Ahoana ny nananganan'i Ngannou ny hoaviny?
Teraka tao amin'ny fianakaviana mpanao haiady andalambe, nanomboka niasa ho mpitatitra fasika tamin'ny faha-12 taonany i Ngannou ary indrisy fa tsy mba nahazo fanabeazana tsara mihitsy.
14 taona taty aoriana, nanapa-kevitra ny hanao ilay dia lavitra mampididoza ho any Eoropa ilay lehilahy nahazo anaram-bositra ho “Predator”.
“Nandao an'i Kamerona aho tamin'ny faha-26 taonako… Nandany herintaona tao Maraoka aho mialoha ny nifindrako ho any Espaina – helo ho ahy izany.” — Francis Ngannou, miady ho tompondakan'ny sokajy mavesatra
“Nandao an'i Kamerona aho tamin'ny faha-26 taonako, ary mihoatra ny herintaona no nanaovako ny lalana ho any Frantsa satria tamin'ny lalam-piara no nandehanako; Hatrany Kamerona ho any Nizeria, nankany Nizera izay niampitako ho any Alzeria sy Maraoka ary nanavatsava ny ranomasina Mediterranea ho any Espaina. Nandany herintaona tao Maraoka aho nialoha ny nifindrako ho any Espaina– helo ho ahy izany,” hoy i Ngannou.
Niatrika ady maharitra avy amin'ny fisian'ny Boko Haram sampan'ny ISIS hatramin'ny taona 2013 i Kamerona, sy ny krizin'ny mpiteny anglisy hatramin'ny taona 2016, rehefa nanatontosa hetsika fanoherana ny governemanta mpiteny frantsay ny Kameroney miteny anglisy, milaza fisian'ny politika fanavakavahana, fanosehana anjorom-bala ary famoretana.
Araka ny nolazain'ny Firenena Mikambana, ny ranomasina Mediterranea no “iray amin'ny ranomasina fiampitana ahafatesan'olona be indrindra eto ambonin'ny tany” ary “olona tombanana ho 2275 no rendrika na nanjavona tao” tamin'ny taona 2018, araka ny tatitry ny Firenena Mikambana.
Na izany aza anefa dia mitazona mafy i Ngannou fa nilaina natao izany. “Izany no karazana fahasarotana tao amin'ny fiainako ary tsy dia tsara loatra eritreretina. Saingy izay no sorona nilaina novitaina mba hahatongavana aty,” hoy izy nanampy.
Tsy nanan-kialofana i Ngannou raha tonga tao Paris tamin'ny voalohany. Indray andro, he “Nirenireny tao amin'ny Orinasan'ny MMA tao Paris” izy ary nahatsara vintana azy hatory ao amin'ny gym ny tompon'orinasa raha nanao fanazarantenan'ny mpiadin'ny MMA izy. Avy eo izy nanomboka ho matihanina tamin'ny taona 2013 ary niainga avy tao ny lalan'asa maha-mpiady azy.
Valim-babena ho an'ny taranaka mpiady manaraka
Taorian'ny fanantenana hiverina any an-tanànakeliny indray andro any mba hampakatra ny nofinofin'ny ankizy, nametraka ny toeram-pikotranana fanaovana haiady mifangaro voalohany tao Batie ity athletan'ny UFC ity tamin'ny janoary 2019.
Hody tsy hoela any amin'ny niaviako 🤩 Batie, Kamerona, fombandrazana, fitafiana, boaikelin'ny fasika.
Ny fisantarandraharaha, antsoina hoe Francis Ngannou Foundation, no mampanome toky ankizy ny tenany hanohy fanazarantena matihanina ao amin'ny toeram-pikotranana izay mahazaka mpiofana hatramin'ny 100.
Fahazarana sasakalina! Jereo i @Francis_Ngannou mampianatra haiady ny ankizy ao Kamerona
“Mampatanjaka ny ankizy aho hanampy azy ireo hatoky ny tenany, tahaka ny nataoko,” hoy ilay 32 taona. “Mbola matoky aho fa ny finoana tao amiko tao no nanome hery ahy hiezaka na dia teo aza ny fahantrana. Izay no iriko homena ny ankizy.”